2-basy fampiasa bbg ho an'ny vokatra fluide sy pasty
by Delta Engineering / Talata 20 Janoary 2015 / Published in Guns / Valves
Ny DAG 003 dia basy fampiharana 2-komponén ho an'ny vokatra afrika sy pasty. Izy io dia mety amin'ny fitrandrahana, ny famafana ary ny fampiharana ny vokatra 2-singa.
Ny DAG003 dia modrafitra modely ary manana safidy hafa mba hamenoana ny filàn'ny fangatahana tsirairay. Ireo basy dia mazàna ampiasaina amin'ny mpamono statis azo ampiasaina. Midika izany fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mila manadio ny basy intsony aorian'ny famokarana.
Izy io dia basy fampiasana milina azo antoka sy hentitra izay afaka mahatanty ny tsindry mafy amin'ny 300 bar.